kaspersky antivirus အတွက် key update- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
kaspersky antivirus အတွက် key update
အခုကျနော့် ksapersky antivirus 6.0.2.614 က black list ဖြစ်သွားတယ် ။ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမသိဘူး ။ activated keys တွေထည့်တော့လဲမရဘူး ။ National CD ဆိုင်ကိုသွားမေးတော့ အရင်ဆုံး antivirus ကို uninstall အရင်လုပ်ရမယ်တဲ့ ။:(( လုပ်လို့လဲရ၀ူး ..
ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး ။ uninstall လုပ်မရတော့ ၊ တခြား antivirus တွေလဲတင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ။ တရုပ် web site ကလဲမရဘူး ။ www.xtremew.org မှာလဲရှာတာမတွေ့ဘူး ။ ဒီအတိုင်းချည်းသုံးနေရတာ ။ ကျနော့် com တော့ ကြာရင် virus ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းဖြစ်တော့မှာပဲ ။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ တဆင့်ချင်းစီ ရှင်းပြပေးပါလားဟင် ။ ကျနော်က တော်တော် ပိန်းလို့ ။ မရှက်တမ်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၀န်ခံရရင် ဘာမှကိုမသိတာပါဗျာ ။ ရှေ့မျက်နှာ ပုဆိုးခြုံပြီး ရိုးရိုးသားသား ၀န်ခံလိုက်ပြီနော် ။ သေသေချာချာ ကူညီကြပါအုံး ။ နောက် မျက်နှာအတွက်တော့ sorry နော် ။
မသိတဲ့လူကို မတတ်တဲ့လူကရှင်းပြရမှာပေါ့နော်။ ဝယ်သုံးလိုက်ပါ။ ဟီး.....။ ငါတော့အရိုက်ခံရဖို့နီးပြီ။ ဟီး.........
ဗားရှင်း ၆ ကိုပဲသုံးပါ။ အခုထိ ဘလက်မဖြစ်ပါဘူး။ စမ်းကြည့်ပါလား။
အဲ ကိုစီခရေဇီ ကတော့ http://www.kavkiskey.com ကိုညွှန်းနေတယ်ဗျ။ စမ်းကြည့်ပါလာ။
ညမီးအိမ်ခင်ဗျား ... တရုတ်စာမတတ်လို့ ကိုအဲဒစ်ပြောသလို ပေါက်ဖော်ကြီးတော့ မခေါ်လိုက်နဲ့နော ... ဒုက္ခများသွားနိုင်တယ် ... ဟီး ... ခေါ်မယ့်ခေါ် တရုတ်မလေးခေါ်ပေါ့ဗျာ
အဲ ... အဲဒီ၀ဘ်ပေ့ချ်မှာက တရုတ်လိုချည်းဆိုတော့ ကျနော်လည်း ရွာလည်သွားသေးတယ်။ ဟုတ်သေးပါဘူး။ တခုခုတော့ ရှိရမယ်ဆိုပြီး ရှာကြည့်တော့ ဒီလိုတွေ့သဗျား ...
KAV6=Kaspersky Anti Virus 6, KAV7=Kaspersky Anti Virus 7
KIS6=Kaspersky Internet Security 6, KIS7=Kaspersky Internet Security 7
အခု ညမီးအိမ်သုံးတာက antivirus6ဆိုရင် KAV6 တွေကို ဒေါင်းလုတ်ချရမှာပေါ့။
၁။ KAV6 တခုခုကို ကလစ်လိုက်ပါ။ နောက်စာမျက်နှာတခုပေါ်လာပါမယ်။
၂။ click to download this site ဆိုတာကို ကလစ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို အဲဒီ key ကို ရလာပါမယ်။
နောက်ထပ်ကီးတွေအတွက်လည်း အဲလိုဘဲ အဆင့်ဆင့်ပြန်လုပ်ပေးရပါမယ်။
အိုကေနော်။ ကျနော်ပြောတာမရှင်းရင် ထပ်မေးပါ။ အောက်မှာ ရုပ်ပုံထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ကိုဘီဟုတ် (bhope) ... ဒီလိုဆိုတော့ တရုတ်နာမည်လိုလို... ဟီး
ကပ်စပါးစကီး uninstall မရတာကို Software Remove Master, My Uninstaller တို့လို ဆော့၀ဲတွေနဲ့ ဖျက်လို့ရပါတယ်။
ကျနော့်မှာ လောလောဆယ်တော့ Software Remove Master တော့ရှိတယ်။ ကျနော်ဆွဲချထားတာက technical seven ကပါ။ ခုတော့ ဘယ်နားရောက်နေမှန်း ရှာရခက်မှာမို့ တနေရာရာမှာ ကျနော်ပြန်တင်ပေးလိုက်မယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုစီခရေဇီပြောတဲ့ www.kavkiskey.com က ကီးတွေနဲ့ အရင်စမ်းကြည့်ပါလား။ ဒေါင်းလုတ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ အပေါ်ကပို့စ်မှာ ခုဘဲရေးပေးထားတယ်။
Software Remove Master ကို ဒီမှာဆွဲချလိုက်ဗျာ
ဘာညာဘာညာစကားများရင် crack သုံးလိုက်
ပြီးရင်တော့ ကပ်စပါးစကီး ဖျက်လို့ရပြီထင်ပါတယ်
kaspersky key ဆိုဒ်လေးဗျ။ တရုတ်ကတင်ထားတာထင်တယ်။ ဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမလဲမသိဘူးဗျ။ တရုတ်လိုရေးထားတော့နားမလဲဘူးဗျ။ စမ်းသပ်ပြီးကောင်းမကောင်းပြောပေးကြပါနော်။ ဆိုဒ်ကဒီမှာဗျို့ http://www.kavkiskey.com/ အိုကေတယ်ဟုတ်။ စောင့်နေမယ်နော်။ reply တွေကို။ :106::d
အခု google ကောင်းမှုနဲ ဘာသာပြန်ရတာ အခက်ခဲမဟုတ်တော့ပါဘူး တော့ပစ်နဲ့ မဆိုင်ပေမဲ့ ပြောစရာအကြောင်းနည်းတော့ ဒီမှာပဲပြောလိုက်တော့မယ်။ ကျွန်တော်ဆို တရုပ်မလေးတွေကိုသိပ်ကြိုက်ဆိုတော့ သူတို့တွေနဲ့ ချက်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုလဲ သူတို့ကနားမလည်း သားသား က ဝေါ်အိုက်နီ ကလွယ်ရင် ကျန်တာ မတတ်ဆိုတော့ ဖူးစာရေးနတ် google Language Tool အကူအညီနဲ့ အဆင်ကိုပြေလို့။ ဟီး.........
http://www.google.com/language_tools?hl=en မှာ အင်္ဂလိပ်လိုရိုက် ပြီးတရုပ်ကိုပြန်ခိုင်း တရုတ်နဲ့ရိုက်လိုက်တာကို eng လိုပြန်ပြောင်း။ ဟီး အဲ့လိုလုပ်ကြည့်ကြပါလား။ ဆိုက်တွေ ကိုလည်းဘာသာပြန်ပေးတယ်။ ကောင်းမှကောင်း သားသား အကြိုက် google language tool ပေါ့။
ကျွန်တော်အဲဒီကနေ download ချဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ kasper က7မှာတောင် ဘားရှင်းတွေက အများကြီးပဲ ဆိုတော့ အခု ဟာတွေက ဘယ်ဘားရှင်း အတွက်လဲ။ ကျွန်တော်က kaspersky 7.0.1.321 ကိုသုံးတာပါ။ သုံးလို့မရဘူး။:((:((:((
ကိုရဲမန်း (yeman) ခင်ဗျား
အဲဒီထဲက တခုမဟုတ်တခုနဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ
လိုင်စင်ကီးလဲပုံကို ကျနော်ဒေါင်းလုတ်စင်တာမှာ အခုသွားတင်ထားပေးလိုက်မယ်။
ဒီမှာသွားပြီး ဒေါင်းလုပ်လိုက်ပါ။ MZ ဒေါင်းလုတ်စင်တာမှာတင်ထားတာပါ။
ကီးသုံးလေးခုလောက် ဆွဲချထားပြီး တခုပြီးတခုစမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ
The first thing you have to do is applyapatch. And what does this patch do you say? Well, it unblacklists all the blacklisted keys so you can use them as if they weren't black listed!
အဟီး သားစမ်းထားတာဟုတ်ဘူးနော် တူညားစမ်းထားတာကို ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ ...
အဆင်မပြေကြဘူးလို့ ခဏခဏ တွေ့နေလို့ ..။
စမ်းပြီးရင် ပြောပြပေးကြပါဦး အဆင်ပြေ မပြေပေါ့။
CW KasperSky Tool, 100% WORKING VALID KASPERSKY UNTIL 2010
its to fix Kaspersky KAV and KIS
so you can use it without having loss of any feature,
Only run it onceamonth, This tool has an AUTO Running option,
So itautomaticly runs onceamonth.
ကြည့်ရတာ တစ်လ တစ်ခါ RUN ရမယ်ထင်တယ်၊ Auto Run Option ပါဆိုဘဲ ..စမ်းကြည့်ကြပါလား ..။
ပြီးရင် ပြောပြပေါ့ အတွေ့အကြုံတွေ ..
ဒါကလဲ တစ်မျိုးပေါ့ ... သိဘူး
ကီးတွေထုပ်ပေးတယ်ဆိုတာဘဲ Work Fine လို့လဲဆိုထားကြသေးတယ် ..။:1:
အာ . . . :14:
သားနာမည်ကို ဖျက်တယ်။:((:((:(( သားနာမည်က ရဲမာန်၊ နောက်ပစ်ကြီးမကြိုက်လို့ မထည့်တာကို။
စာသေချာ မဖတ်ပဲ http://www.mysteryzillion.com/forums/downloads.php?do=file&id=33 မှာဒေါင်းလော့ ချတာ .doc တွေပဲရတယ်။ ကိုဇူးလူး တင်ထားတဲ့ ကီးတွေမတွေဘူးဗျ။ ကူညီပါဦး။:5:
သီးခံသီးခံ ကိုရဲမာန်ရေ ကျွန်တော်တို့ ကိုဇူးလူကြီးက မျက်စီမကောင်းဘူးလေ ကလေးအနှီးလျှော်တာ နေရာမကျလို့ သူ့မိန်းမ အဝတ်လျှော်ဒုတ်စာ မိထားတယ် မှားတဲ့ အခါမှာလဲ မှားမှာပေါ့ ဟီး။
ပထမတင်ထားပေးတာက www.kavkiskey.com မှာ ကီးတွေကို ဘယ်လိုရယူနိုင်သလဲနဲ့ ကီးအသစ် ဘယ်လို ထည့်သွင်းလဲဆိုတာလေ။ ကျနော်ထင်တာက အဲဒီ၀ဘ်ကိုသွားပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဒေါင်းမယ်စိတ်ကူးရင် အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။ (အဲဒီစာမျက်နှာလင့်က ဒီမှာ ကလစ် ...)
ပီအက်စ်- ကိုစည်သူက ကျနော့်ကို မျက်စိမကောင်းဘူးတဲ့။ လုပ်ပုံ လုပ်ပုံ။ သူ့ကျတော့လည်းကြည့်ပါအုံး။ ဇူးလူးကို ဇူးလူတဲ့။ မျက်စိကို မျက်စီတဲ့။ ဟီးဟီးဟီး ... မြင်းဟီတာမဟုတ်။ အားလုံးကိုခင်မင်ပါသည်ခင်ဗျား။
ကျွန်တော် kav7.0.1.325en ရဲ့ ကီးလေးလိုချင်လို့ပါ...ဗျာ..
Download မှာတင်ထားတဲ့ kav7key.rar က password ကြီးနဲ့ ဖွင့်လို့ရဖူး.........:106:
ဘယ်လိုဖွင့်ရမှာလဲ password ပေးပါဦးဗျာ......:((:((:((:((:((
Only for Kav Internet Security7and 8
အမြဲ update ဖြစ်ပါတယ်။ Blacklist ဖြစ်သွားရင် အဲဒီထဲကိုသာ ၀င်ကြည့်လိုက်။ မရရင်တော့ မသိဘူး။ :68:
အဲဒီကီးရဲ့ rar ဖိုင်က password ခတ်ထားတယ်ဖွင့်လို့ရ၀ူး.....ကူညီပါအုံးဗျ.....
ကျနော်တင်တုန်းက p/w မပါဘူးထင်တာဘဲ။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတုန်းမသိဘူး။ အခုအဲမှာဘဲ p/w မပါတာကို အသစ်ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။ အဆင်မပြေရင်ပြောပါ။ ညီအကိုတွေ မဟုတ်လား။
တကယ်လို့ KIS7keys လိုမယ်ဆိုရင် အခု June အတွက် keys တချို့ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကျနော်ကတော့ ဒီ key နဲ့ပဲ အဆင်ပြေသွားတယ် ။ ကျန် MZ members ထဲက KIS 7.0.1.325 သုံးသူများလည်းအဆင်ပြေပါစေ ။ http://www.4shared.com/file/50807325/28841e91/KIS_7___June_.html
flashy virus ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်းဆိုင်မှာ ၀င်ဘူးတယ် flashyfix.exe နဲ့သတ်လို့ရနိုင်ပါတယ် antivirus တစ်ခုခုလောက်ရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ flashyfix.exe ကို နှစ်ခေါက်လောက် run ပြီး restart လုပ်ကြည့်ပါအုံးရနိုင်ပါတယ်
svchost.exe ကဗိုင်းရပ်စ် ထင်တယ်ဗျ။ ကျွှန်တော့်computer က system ပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်။ user ပိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဗျ။ task manager ထဲမှာကြည့်ကြည့်တာ.. ကယ်ကြပါဦး.. စက်ကိုလေးစေတယ်ဗျာ...
Jassid wrote: »
media player ဖွင့်ရင် လဲ သီချင်းတစ်၀က်ရောက်တာနဲ့ ထစ်ထစ်ထစ်ထစ် ဖြစ်သွားတယ်:D
kaspersky internet security 7.0 beta ကို ဘယ်လို crack ပြီး key ကို update လုပ်လဲဆိုတာ...
ဒီမှာ ဒေါင်းလော့ အရင်လုပ်လိုက်
ဒေါင်းလော့ပြီးသွားရင် Zip ကိုဖြေချလိုက်
စက်ကို Restart ချ၊ ပြန်အတက်မှာ (f8) ကို နှိပ်ထားပြီးတော့ Safemode ထဲ၀င်လိုက်မယ်..
KIS7key.reg ဆိုတာကို double click ပေးလိုက်မယ်
ပြီးရင် KIS7-Crack ကိုလည်း Double Click ပေးပြီး Run လိုက်မယ်..
စက်ကို Restart ပေးလိုက်မယ်..
အခု kaspersky7ကို Activate ပေးဖို့မေးလာပြီဆိုရင် Kispersky6ရဲ့ key တွေကို သုံးပြီး Activate လုပ်နိုင်ပါပြီ..
version 7.0.0.119 နဲ့ 7.0.0.120 အထိ 100% အလုပ်လုပ်ပါတယ်..:103:
Can i use direct update with that?
Please View the Post of Zulu (I think he may be from Africa)!!!
But i'm not sure coz i didn't try that African's post out!!!!
ကျွန်တော်ကတော့ kaspersky 7.0 ကိုသိပ်ကြိုက်ပါတယ်....
Can you please give me the key of Kaspersky Internet Security 9.
:O is9out ? you mean KIS 2009 ?
KIS 2009 key: http://www.mediafire.com/download.php?lcasznz1h1n
မြန်မာပြည်ကပါ ဒေါင်းလုပ်လုပ်မရလို့ပါ ရနိုင်တဲ့ဆိုက်က ထပ်ချပေးပါဦး
kaspersky trial resetter တဲ. စမ်းကြည်.ပါလား
အောက်မှာ code ပါတယ် copy ကူး .bat နဲ.သိမ်းပြီး run
title Kaspersky v7.x Trail Reset 2.0 by Gr0uND ZYr0 aka De-EvIL
ECHO This patch will restore Kaspersky trail so it can be re-used in Trail Mode..
echo ================KASPERSKY TRAIL RESET 7.0===========================
echo====================================================by Gr0uND ZYr0===
echo Make sure you have exited Kaspersky and follow these steps.
::(A)Choosing Scetions Bigin Here
echo 1- Reset Kaspersky Trail
echo 2- About Kaspersky Trail Reset
if %cho1%==1 goto B2
if %cho1%==2 goto D1
if %cho1%==exit goto End
echo please choose (1) or (2) . or type Exit, to Exit
Echo Done, Should Trail Reset Exit Now? (Y/N)
if %cho3%==Y goto DX
if %cho3%==n goto R1
> %TEMP%.\_Fix.reg ECHO Windows Registry Editor Version 5.00
>>%TEMP%.\_Fix.reg ECHO [-HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_KasperskyLab\_LicStorage]
>>%TEMP%.\_Fix.reg ECHO [-HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_SystemCertificates\_SPC]
REGEDIT /S %TEMP%.\_Fix.reg
::(D) OTHERS = Greetz, Flames, Shouts here = LOL why are you reading inside the bat file anyway?? yeah i know, i dont care anyways >
echo version: 2.0 Released: 23/3/08
echo writtenby: Gr0uND ZYr0
echo This patch was written by De-EvIL aka Gr0uND ZYr0
echo Credit for the Trail Reset discovery goes to hansomyy25.
echo Greetz fly out to all astalavista members.
echo Thank you for spending some time reading this.
echo Gr0uND ZYr0
kasper 2009 keys လေးတွေကိုဘယ် ကနေဒေါင်းရလဲဟင်..ပြောပြကြပါဦးနော်
ကျနော်တော့ ဒီထဲက ယူလိုက်တယ်ဗျ။ အခုထိတော့ အဆင်ပြေတုန်းပဲ။ နဲနဲတော့မျက်စိရှုပ်မယ်။ အင်္ဂလိပ်စာတွေရှာပြီး နှိပ်သွားပေါ့ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Tin Soe Aung
ကျေးဇူးပါဘဲ...ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်နဲနဲလောက်လိုသေးတယ်ဗျ...စက်ကများလို့ဗျိုု့ .. ၁၀လုံးလောက်သုံးရမှာမို့လို့ပါ....ရှိသေးရင်နဲနဲပေးပါဦးနော် ....
)Kaspersky anti-virus 2010 activate key လေးတွေလိုချင်လို့
ဘယ်ကနေ down ရမလဲ ပြောပေးကြပါ :65:
MZ က သယ်ရင်း အားလုံးကို ပိုးစိုးပက်စက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် :P
kasper ke update လေးပါ ( 3rd Jan 2010)\_